DONEAX Robot Manaparitaka Ultraviolet Ultraviolet Smart, fitaovam-piadiana vaovao hisorohana sy hifehezana ny fahatsapana hopitaly!
Rehefa miditra tsimoramora amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso mahazatra ny valanaretina satro-boninahitra vaovao, ho an'ny pnemonia satroboninahitra vaovao, izay mampiasa droplets sy contact ho toy ny làlam-pandefasana lehibe indrindra, ny paikady manan-danja indrindra hanakanana ny làlam-pifindrany dia ny fanaovana sarontava, rivotra ary fahadiovana tanana, toy ny tsara ...
LG dia mamolavola robot mahaleo tena miaraka amin'ny fiasan-disinfection ultraviolet | Hotely hotely LG dia namolavola robot mahaleo tena miaraka amin'ny fiasan-disinfection ultraviolet
DONEAX Electronics any Shenzhen dia mamolavola robot mandeha ho azy izay hampiasa ultraviolet (UV-C) hamonoana ireo faritra misy ifandraisana avo sy avo. Mikasa ny hanome robots UV ho an'ny mpanjifa hotely, fanabeazana, orinasa, antsinjarany, trano fisakafoanana ary fitaterana entana any Etazonia ny orinasa amin'ny fiandohan'ny 2021. W ...
Novonoina tamim-pahombiazana ilay tantara an-tsary coronavirus (COVID-19) tamin'ny taona 30 tany amin'i Seoul Viosys sy SETi tany Seoul, Korea, izay nambaran'i Violeds SETi. Ny drafitry ny fitsaboana pnemonia virus coronaavirus (andrana fitsapana 7) dia navoakan'ny National Health Council ary nanipika fa ny taratra ultraviolet dia afaka ...
Robot famonoana otrikaina sy fanamorana ny teknolojia DONEAX no ampiasaina hamonoana ireo otrikaretina sy hamonoana virus, bakteria ary superbacteria hanatsarana ny fahadiovan'ny tontolo iainana.
“Ireo marary izay mahazo fitsaboana eto dia matetika voan'ny hery fiarovan'ny vatana ambany noho ny fitsaboana ary mora voan'ny areti-mifindra. Ny mikraoba miteraka aretina dia lasa marani-tsaina kokoa ary mahatohitra antibiotika, izany no ilantsika fitaovam-piadiana vaovao toy ny teknolojia DONEAX vita amin'ny pulsein s ...
Ny coronavirus vaovao, ny fitambaran'ny vokatra DONEAX, dia afaka manohitra ny 2019-nCoV amin'ny alàlan'ny fahefana.
Ny coronavirus vaovao, ny fitambaran'ny vokatra DONEAX, dia afaka manohitra ny 2019-nCoV amin'ny alàlan'ny fahefana. Ny drafitra momba ny famaritana pnemonia coronavirus sy ny drafitra fitsaboana dia natomboka tamin'ny faha-3 tolakandro tolakandro (National Defense Health Committee) (andrana fizarana fahadimy). Ny vokatra vokarin'ny teknolojia Shenzhen DONEAX ...
Fianarana momba ny fampiharana ny | robot famonoana ultraviolet pulsa ao amin'ny paroasy fitokana-monina
Ny pnemonia coronavirus vaovao dia nitondra fahatakarana matotra tamin'ny olona ny amin'ny lozam-pifamoivoizana mahery vaika amin'ny fiarahamonina olombelona hatramin'ny volana desambra tamin'ny taon-dasa. Ny lakilen'ny fisorohana aretina sy ny drafitra fanaraha-maso feno dia ny fanaovana tsara amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina ary manadio ny marary ...
Teknolojia vaovao - manohana ny fahatsapana any amin'ny hopitaly - Nahavita zava-bita lehibe ny vokatra teknolojia DONEAX
Ny teknolojia fanavaozana dia manampy ny fahatsapana hopitaly Tamin'ny 20 Desambra 2019, ny "fivoriana isan-taona akademika sy ny fivorian'ny fifidianana fahadimy an'ny Komity mpitsabo aretin'aretina hopitaly an'ny Fikambanan'ny mpitsabo any Shenzhen" izay notazonin'ny Association Medical Medical any Shenzhen University Ge ...
Ny Hopitaly Huashan any Shanghai dia nampiditra ny sterilizer ho an'ny jet jet flat DONEAX ambony mba hiarovana ny mpiasa ara-pitsaboana
Hatramin'ny nivoahan'ny pnemonia coronavirus vaovao, ny fikarohana ny asidra niokleika dia nanjary fitaovana lehibe hanandramana tranga. Amin'izao fotoana izao, ny fizahana asidra niokleika dia nanjary dingana ilaina amin'ny famotopotorana lalina sy fitsaboana ao amin'ny hopitaly. Ny fitambaran'ny mpiasa ao amin'ity faritra ity dia sarotra ...
Ny teknolojia DONEAX dia nanapotika ny robot desinfection UV nopihan'ny Biraon'ny Fanaraha-maso ny Fahasalamana
Ny aretina Coronavirus dia niparitaka elaela, ary ny fisorohana sy ny fanaraha-maso siantifika no lasa lohalaharana amin'ireo laharam-pahamehana. Tamin'ny 31 Janoary 2020, namindra maika ny milina famonoana ultraviolet novokarin'i Shenzhen DON ny Birao Fanaraha-maso ny fahasalamana ao amin'ny tanàna Shenzhen novokarin'i Shenzhen DON ...
Ny vokatra DONEAX desinfection series dia miditra amin'ny departemantan'ny fitsaboana ultrasound ao amin'ny oniversite fahavalo ao CUHK mba hanampiana ny fifehezana ny hopitaly!
Ilay valanaretina corovavirus tampoka dia nametraka indray ny fifehezana ny aretina amin'ny hopitaly amin'ny toerana manan-danja amin'ny fampandrosoana. Amin'ny maha fitaovana fanaraha-maso iraisana azy any amin'ny toeram-pitsaboana, ny famotopotorana ultrasonic dia matetika mifandray amin'ny hoditra na amin'ny membrane mucous an'ny marary mivantana ary misy nu lehibe ...